टिम रावत र साइपाल उपाधि नजिक – Khel Dainik
टिम रावत र साइपाल उपाधि नजिक
काठमाडौं (खेलदैनिक) । टिम रावत र साइपाल प्रथम पीएचसीए खुला एसइइ थ्री अन थ्री बास्केटबल प्रतियोगिताको ब्वाइजतर्फ शुक्रबार फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् ।
घट्टेकुलोस्थित आयोजक सूर्योदयको कोर्टमा भएको सेमिफाइनलमा टिम रावतले भीएस कलेजलाई २१–१६ ले पराजित गर्याे । टिम रावतको जितमा सम्राट भूमिले १० अंक योगदान गरे । अर्को सेमिफाइनलमा साइपालले क्याम्पियनलाई १२–११ को झीनो अन्तरले हरायो ।
गल्र्समा सूर्योदय ‘बी’ फाइनलमा पुग्यो । सूर्योदय ‘बी’ ले साइपाल ‘बी’ लाई ८–६ ले पाखा लगायो । विजयी टिमका लागि विपना गिरीले ५ स्कोर गरिन् । उपाधिका लागि सूर्योदय ‘बी’ ले सूर्योदय ‘ए’ र भीएस कलेजबीचको विजेतासंग खेल्ने छ ।
प्रतियोगिता शनिबार सम्पन्न हुने छ । प्रतियोगिताको ब्वाइजमा ३२ र गल्र्समा १६ गरी जम्मा ४८ टिम सहभागी छन् । ब्वाइजमा पहिलो हुनेले २० हजार, दोश्रोले १० हजार र तेश्रोले ५ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने छन् । गल्र्समा शीर्ष तीन स्थान हात पार्नेले क्रमशः १५ हजार, ८ हजार र ४ हजार नगद पुरस्कार जित्ने छन् । ब्वाइज÷गल्र्स दुवैमा ‘मोस्ट भेलुएबल प्लेयर’ र सर्वाधिक स्कोरकर्तालाई जनही २ हजार नगदबाट पुरस्कृत गरिने छ ।
← रत्न, प्रिन्स, प्रफुल र दिपेश अन्तिम चारमा गणेशमान सिंह स्मृति बक्सिङ फागुनमा →
आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने माघ २, २०७७
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ? माघ २, २०७७
नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली माघ २, २०७७
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा माघ २, २०७७
राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित माघ २, २०७७
दावेदार मनाङ सेमिफाइनलमा माघ २, २०७७